जुग्री जुलुस – Janaubhar
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ ७, २०७५ | 372 Views ||
दाङ । २०७२ भदौ ।
‘छोट्का तँ !’
‘काँ जान लागिस् ?’
‘के काल बेसाउन सत्तिस् ?’
‘उसो भए के खोज्न ?’
छोट्का ‘थारु’ नेपाली भाषामा बोले । जिम्दार ‘खस’ नेपाली भाषामा ।
भुरान हिँडेको जुलुसमा सामेल हुन दौडिरहेका छोट्का जिम्दारसित आँखा जुँधाएर ठिंग उभिएका थिए । बाटो काटेर हिँड्ने छोट्का त्यस दिन भने जिम्दारलाई देखेर नक्कली खोकी खोक्दै आफैँ जिम्दारकहाँ पुगेका थिए । र, भेग्वा लगाएका बृद्ध थारु सुरुवाल भोटोमा सजिएका जिम्दारसित आमनेसामने उभिएका थिए ।
‘साँच्ची बौलाइस्’ भन्दै जिम्दार एकाएक झस्किए ।
होइन कि भनी जिम्दारले आफ्नो ‘जिम्दार आँखा’ मिचे ।
हिजोको ‘छोट्का’ थिएनन् ।
‘कमैया’ र ‘मुसा’मात्र देख्ने जिम्दार आँखाले छोट्कालाई पहिलोपालि जग्गु थारु देख्यो ।
छाँगोबाट खसे ।
थारु लस्कर देखेर जिम्दारले ‘जनयुद्ध’ सम्झिए ।
त्यसपछि उनका आए क्रमशः साइँलो छोरो वासुदेवलाई ‘कमरेड’ बनाएर थारुलाई थामथुम पारेको । छोरा, बुहारी र छोरी÷ज्वाइँलाई सरकारमा जान सक्ने ठुला दलमा तैनाथ गरेको ।
(राज्यसत्ता त उनको छँदै थियो ।)
छोट्काको हातमा भाला थियो ।
थारुको हातमा यसअघि देख्ने भालालाई त्यस दिन भने जिम्दारले ‘एके फोर्टी सेभेन’ देखे । त्यसपछि जिम्दार मनमा एकाएक बैशाख १२ गतेको भुइँचालो गयो ।
जिम्दार चुपचाप घरतिर लागे । तर, जग्गुको कुराले जिम्दारलाई पछ्याउन छाडेन, ‘बाज्या, मै जुग्रीहँ लेख आइम । उहीसे नच्ना मन बा, मघौटा नाच ।’द्द
जिम्दार छिटोछिटो कोठाभित्र पसे । चुकुल लगाए । मन थामिएन । ‘मन राख्न’ हुन्छ कि भनी टिभीको ‘रिमोट’ दबाए ।
सरकारी टेलिभिजनले ‘नयाँ संविधानको स्वागत्मा दीपावली गर्न’ भनिरहेको थियो ।
जिम्दारले झ्यालको पर्दा ताने । उनका नजर झ्यालबाट सडक पुग्यो । एकाएक जिम्दार आँखा थारु लस्करमा पुगेर अडियो ।
झन उकुसमुकुसिए जब जिम्दारले देखे आश्मानी, प्रसादु, बुधनी, रिश्मान र सुगानीलाई ।
लस्करमा कोही श्रीमती छुटेका थिए त कसैका श्रीमान् । कसैका बहिनी छुटेका थिए त कसैका दाजु । कतिका प्रेमी भुरानमा थिए त कतिका प्रेमिका ।
जिम्दारले देखे, तड्पिरहेका थारुका सावँला अनुहार ।
त्यसपछि जिम्दारको अनुहार पसिनाले भिज्न थाल्यो ।
जग्गु नाच्दा न जिम्दारको खुसी खोसिन्थ्यो न जिम्दारको रहर पोखिन्थ्यो । तैपनि जग्गुले आफूखुसी जुग्रीसित ‘मघौटा नाच्ने’ भनेपछि जिम्दार आलसतालस भए । नाचेको कसरी हेर्ने भन्दै जुग्री भेट्न हतारिएका जग्गु सम्झेरै जिम्दार अत्तालिए ।
‘हँस्टीखेल्टी मैया बैठगिलघ,’ गत माघीमा तन्नेरी थारुमाझ जग्गुले आफ्नो प्रेमकथा यसैगरी थालेका थिए ।
झिङौरास्थित माघीको त्यो साँझ जग्गुको प्रेमकथामा समर्पित थियो ।
जग्गु र जुग्री एउटै गाउँका थिए । घाँस, दाउरा लिन मात्र होइन, गाई चराउन पनि सँगसँगै जान्थे ।
एक दिन जग्गुले जुग्रीलाई भने, ‘मै तुहिन भ्वाज करमद्ध ।’
सम्झदै जग्गुले यति भनेपछि आफूलाई थाम्न सकेनन् । उनको मन आँखाको बाटो लाग्यो । रोक्दारोक्दै बाहिरियो ।
त्यसपछि उनले नेलको खट देखाए । खट उस्तै थियो । तर नेल लगाइएको उनका गोडा भने चाउरिएर सिन्का भएका थिए ।
जग्गुले फेरि माघीमा जुग्रीसित नाचेको सम्झिए । दसैँमा सक्ख्या नाचेको पनि ।
यसै ओरालो लागेको उनको मन भक्कानिदै बग्यो ।
माघीमा र दसैँमा जग्गुले मादल बजाउँथे । गाउँथे । उनले बजाएको मादल र गाएको गीतको तालमा जुग्री नाच्थिन् ।
कोही जुग्रीसित बोले कि जग्गु रिसाउँथे ।
जुग्रीले भन्थिन्, ‘बोल्लसे का बिग्रल ट ?’छ
बठिन्याटहरुले जिस्काउँथे ।
जुग्रीले भन्थिन्, ‘मन पर्लसे जैम ।’ठ
जुग्री भुरान लाग्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र बिहेको योजना बुनेका थिए ।
जस्तोः सँुगुर काट्ने । आफन्तजनलाई निम्तो दिने । भोज गर्ने ।
प्रेम पनि लुटाएर उनी कसरी कमैया भए भन्ने कथा सुनाउँदा त्यस साँझ जग्गु बेस्मारी बगे आफ्नै बिगतको बबईमा ।
‘बाज्या, ऊब्याला चुमठ् कि नाहीँ ? चुमठ् ट कसिक चुमठ्,’ड भावुक वातावरणलाई रसिक बनाउन एक युवाले सोधे ।
कथाले भावुक बनाए पनि ‘डल्ली भैंसीको मोही’ढले जोस थपेको थियो । मोहीको जोसको बाटोहुँदै कथा बाटो लागेको थियो ।
प्रश्न सुनेर जग्गु एकछिन थामिए ।
‘आम्हीसम् ध्यावर नि धुइलहुँ । नि पट्टीलसे हेर,’ज्ञण् जग्गुले सम्झना साच्न अहिलेसम्म पनि ओठ नपखालेको तर्क गर्दै युवा थारुलाई देखाए ।
साँझ ढल्दैगएको माघमा साँवला जग्गुको ओठ कति प्रष्ट देखियो कुन्नि ?
कति युवाले ‘होइन’ भने त कतिले अचम्म माने ।
जुग्रीसित दसैँ र माघीमा नाचेको फारोफारोगरी सम्झँदै आफूलाई आजको मितिसम्म साँचेका थिए । उनै सम्झना र रहर सम्झेर त जग्गु बाँचेका थिए ।
जुग्रीलाई भेटेर एकपालि आफ्नै भाषामा बच्पनका सबै याद उत्खनन् गर्ने जग्गु मन छ । र, विगतमा गर्न नपाएको मायाको नाउँमा जुग्रीसितै बेस्सरी रुन मन पनि ।
‘मै फें जइम जुग्रीहँ लीह ।’ज्ञज्ञ
भुरान जाने जुलुसमा जग्गु पनि सामेल भए ।
‘जात्तिसे कोट बुबा मैया नि लाख्ख हो निह निगिल ?’ज्ञद्द कतिपय तन्नेरी थारुले मर्ने बेला केको हरियो काँक्रा पनि भने ।
‘का हुइँ निलागी मैया । लक्ठा ।’ज्ञघ
‘काँकर नि गइलु ट निह ? कि ¥वाकल् ?’ज्ञद्ध
‘मन त रह । मैया फें रह । ट आँटभर निआइल ।’ज्ञछ
‘जुग्री हँ भ्याटकर जैना आँट नहीँ आख नि गइनु ।’ज्ञट
‘काँ जे निआइल ऊब्याला ?’ज्ञठ
‘उहँ ट काँ जे निआइल ऊब्याला ?’ज्ञड
‘आब कस्सीक आइल ट ?’ज्ञढ
‘आपनअस पच्बुरल् डाडुभैया डिडीबाबु देख्ख । म्वारअस मैया लुटगइल, खुसी लुटगइल मङ्रु, सोगतवीर, बुधनी देख्ख चोटगर हुइनु ।’द्दण्
जुलुसमा हिँड्दाहिँड्दै जग्गु एकछिन उभिए । त्यसपछि उनले ‘यो मनले त अहिले नगए कहिल्यै भेट हुन्न भन्छ’ भने ।
तन्नेरी थारुले जग्गुलाई हौसाए । एक युवाले ‘यति धेरै बर्षसम्म कसरी थामेको’ भनी सोधे । जग्गुले ‘सपनामा त भेट भइरहन्छ नि’ भने ।
सपनामा त जग्गु र जुग्रीले एकअर्कालाई खुबै गुनासो गर्थे । बेलाबेलामा ‘छ बेला लाग्ला घाम’ भन्दै आफूलाई थाम्थे ।
त्यै सपना त थियो तिनका मन राख्ने बाटो ।
‘अब सपनामा हुने भेटले पुग्दैन’ भनी जग्गु पनि भुरान हिँडेको जुलुसमा मिसिएका थिए ।
तराईमा औलो उन्मुलन भयो ।
पहाडबाट मान्छे ओइरिए ।
त्यसबेला दाङका फाँटमा धान झुलेका थिए । पहेलपुर तोरी फुलेका थिए । र, तिनकै रङमा भूमिपुत्र थारुका अबोध मन खुलेका थिए ।
पहेलपुर तोरीको फूलसित बाजी लाग्दै जुग्रीजग्गु प्रेमको कोपिला लागेको थियो ।
औलो उन्मुलनपछि दाङ झरेका शासक खलकका आँखा पहेलपुर फाँटमा परे । थारु र अक्षर, थारु र राज्यसत्ताबीच गोरु बेचेको साइनो पनि थिएन । त्यसैले शासक खलकलाई ती फाँट कब्जा गर्न आइतबार कुर्न परेन ।
सिंगो पंचायत नै तिनका भएपछि छिनभरमै पहाडी मूलका शासक खलकले सारा फाँट आफ्नो बनाए । त्यसपछि हेर्दाहेर्दै पहाडबाट झरेका शासक खलक जिम्दार भए भने थारु भूमिहीन ।
केही थान परेवा, केही थान भेडा, केही थान गाई धपाउँदै जग्गुका आफन्त भुरान लागे –सपना रोपी गुल्जार बनाएको थातथलोलाई घरी फर्किहेर्दै घरी आँसु पुछ्दै ।
थाहा थिएन ।
भन्थे, ‘भुरान ।’
‘कहाँ हो भुरान ?’
रोल्पाको लोकगीतजस्तै थियो, ‘जाँ लैजाला कर्मले उई हो मेरो घर ।’
कहाँ थियो त्यो भुरान ?
बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर वा सीमापारि ।
पाइलापाइलामा बिच्छी र बाघसँग लुकामारी खेल्दै भुरान पुगे । कति मरे र कति पुगे भुरान ?
कसले गर्नु लेखाजोखा ?
त्यसबेला हो, जग्गु र जुग्रीको परिवार पनि रातारात भुरान लागेको ।
बागर पुग्दा जग्गु समातिए ।
भुरान जान बिलौना गरे ।
जिम्दारले सुनेनन् ।
जिम्दारले जग्गुको खुट्टामा नेल ठोके । सँुगुरको खोरमा थुने । काठले पेले । गोरूजस्तै नारे ।
मनमा पनि नेल ठोकिएका जग्गुले धितमरुन्जेल रुन पनि पाएनन् ।
त्यसबेला जग्गु १५ को घरमा पस्दैथिए भने जुग्री १८ को ।
सुरुमा थारुलाई जिम्दारले खेदे । ‘कजाउन’ चाहिने थारु पनि नरहनेगरी भुरान जान थालेपछि भने जिम्दारले नै थारुका गोडामा नेल ठोकेर रोेके ।
कजाउनलाई जबर्जस्त थुनेर राखिएका तिनै कमैयामध्ये एक थिए, जग्गु ।
कैलाली । २०७२ भदौ ।
नयाँ संविधानको स्वागतमा सरकारले दीपावली गरिरहेको बेला टीकापुरछेउ जुग्रीको गाउँमा भने कर्फु थियो । जलेर आधाउधि बचेको चोसेमोसे घरमा खरानी यत्रतत्र छरिएको थियो । र, आधा जलेको खट्टेमा अडेस लागेर जुग्री टोलाइरहेकी थिइन् ।
त्यै खट्टेमा उनकी भदैनी सुत्थिन् ।
मारिएकी भदैनीको किताब÷कापी खट्टे वरपर छरिएका थिए । अलि पर स्कुले झोलाको फस्नर खुलै थियो । चुलोछेवैमा थियो स्टिलको थाल । जसमा खाँदाखाँदै छाडेको आधा खाना बाँकी थियो ।
जुग्री खट्टेमा अडेस लागी लाहुरेनीजसरी जग्गुको बाटो हेरिरहेकी थिइन् ।
त्यस रात पनि जुग्रीलाई फेरि पिसाब लागेजस्तो भयो ।
मुख काटेर ठुलो बनाइएको प्लाष्टिकको ग्यालेननेर पुगिन् । पिसाब फेर्न गोन्याद्दज्ञ के सिमलेकी थिइन्, कान नै सुनो हुनेगरी आवाज आयो ।
ग्यालेन ढल्यो ।
त्यसअघि फेरेको पिसाब पोखियो भने आधाबाटो झरेको पिसाब जुग्रीको गोन्यामा ।
संविधानको स्वागतमा पड्केको पटका थियो त्यो ।
‘जनयुद्ध’ताका पनि जुग्रीको गाउँ यस्तै जगजगीमा थियो । त्यसबेला जुग्रीको भाइका तीन छोरा अनि धेरै आफन्त मारिएका थिए । उनको भाइसहित धेरै गाउँले बेपत्ता थिए भने धेरै आफन्त बलात्कृत ।
सुर्तैसुर्ताका गोलीले उनकी भाइबुहारी युद्धकालमै ढलिन् ।
बचेकी भदैनीलाई सरकारले मारेपछि सिर्फ जुग्री थिइन् । जुग्रीको साथमा थियो त जल्दाजल्दै सिला रहेको घर ।
१२ मिनेट पनि नबित्दै जुग्रीलाई फेरि पिसाब लागेजस्तो भयो ।
जाँगर नलागी उठिन् ।
अघि ढलेको ग्यालेननेर पुगिन् । पिसाब फेर्न गोन्या सिमलिन् । तर, एक तुर्का पनि झरेन ।
उनका भाइ सोङ्रालाई कर्फु लागेको बेला लगेका थिए । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बालुवाटार पसेर निक्लिदासम्म पनि सोङ्राको अत्तोपत्तो थिएन ।
दाङबाट रातारात भुरान छिर्दा सोङ्रा आमाको पिठ्युमा थिए । हिँड्न खोजेका थिए । तर झाडीमा सम्भव थिएन । हिँड्न नपाएपछि सोङ्रा खुबै रोएका थिए ।
किन किन अचेल जुग्रीलाई जग्गुसित भाइ पनि आउँछन् जस्तो लाग्न थालेको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट लेख्ने कार्यक्रम थियो ।
एकैचोटी टीकापुर पस्ने योजनाअनुरुप थारु टीकापुर पुग्दैथिए ।
टीकापुरको दक्षिणपश्चिम चिलम चौराहामा जुलुसलाई सरकारले रोक्यो ।
झडप भयो ।
जुग्रीको गाउँमा फेरि कर्फु लाग्यो ।
जिम्दारले लुटेका प्रेम खोज्दै, आफ्नो पहिचान खोज्दै जुट्दैथिए थारु । तिनले दिनहुँ प्रदर्शन गर्थे । नारा लाउँथे । कर्फुमै जुलुस निकाल्थे ।
जुग्री जुलुसको अघिअघि हिँड्थिन् ।
र, तिर्खाएका जुग्री आँखाले जग्गु खोज्थ्यो । बेपत्ता सोङ्रा खोज्थ्यो । मारिएका भदैभदैनी खोज्थ्यो ।
उनको अन्तरमनले भन्थ्योः जग्गुसित यसपालि भेट हुन्छ ।
जुग्रीले जग्गुसित अल्लारेमै लाएको माया र दाङबाट बोकीआएको सम्झना फारोफारो गरी आफूलाई धानेकी थिइन् ।
कैलाली र दङाली पत्रकारले लेखेका समाचार सार हुन् यी, जो तपाईंले पढ्नुभयो । काठमाडौंबाट प्रकाशन÷प्रसारण नभएपछि सामाजिक संजालमा पेशेका ती पत्रकार पनि आँधी आएको रातमा हल्लिरहेको डाँडामाथिको लाँकुरी भएका छन् ।
तिनले जुग्री र जग्गुबारे यस्तो लेखेर बिट मारेका छन्ः
जुग्री र जग्गु भेट भएपछि अँगालोमा बेरिदा राताराता भएका तिनका अनुहार एक्कै झल्को भए नि हेर्न मन छ । फुलेका तिनका साँवला अनुहार क्यामेराले क्लिक्क पार्न मन छ । जुग्रीको जोडी माघीमा छमछम मघौटा नाचेको हेर्न मन छ । सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल मात्र आउने काठमाडौंका मिडियामा तिनलाई देख्न मन छ । र, सुन्न÷हेर्न÷पढ्न मन छ, तिनीहरुसँगै तिनका प्रेमकथा ।
(तपाईं त आँ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने मान्छे, भन्नुस् त, कहिले हेर्न÷सुन्न÷पढ्न पाइन्छ ?)
Prevनयाँ मुलुकी ऐनले गरेका व्यवस्थाहरु
Nextविश्वविद्यालय दाङमा, कार्यालय काठमाण्डौंमा